तोडफोड, बन्द कांग्रेसको नीति होइन : कमला पन्त - Tarun Khabar
तोडफोड, बन्द कांग्रेसको नीति होइन : कमला पन्त
तरुण खबर ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:१९
विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएकी नेतृ हुन् कमला पन्त । उनी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय तथा पूर्व मन्त्री पनि हुन् । उनले कांग्रेसको राजनीतिबाट सांसद र मन्त्री बन्ने अवसर पनि पाइसकेकी छन् । सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी उनी विधि, विधान र निष्ठाको राजनीति रुचाउँछिन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने पन्त निडर नेतृ र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छिन् । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पन्तसँग कालिका महतले गरेको कुराकानी :
नेपाली कांग्रेस के गर्दै छ ?
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर ठहर ग¥यो । त्यहीं अनुरुप प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध देशैभरि विरोधका कार्यक्रमहरु सुरु भए । म पनि आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र केन्द्रमा हुने विभिन्न विरोधका कार्यक्रममा व्यस्त छु ।
सत्तापक्ष नै विभिन्न रुपले सडकमा आन्दोलित भइरहँदा कांग्रेस त देखिएन नि ?
सत्तापक्षबाटै नेपाल बन्द, हड्ताल जस्ता काम भएको छ के भन्नुहुन्छ ?
जथाभावी बन्द, हडताल, तोडफोन गर्न कांग्रेसलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको छर ? हामीले त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सम्मान गरेका छौं । न्यायलयले आफ्नो काम गर्न पाउनुप-यो । अपोजिसनका पार्टीहरुले आफ्नो ठाउँमा रहनुप¥यो । प्रतिपक्ष दलले त अहिलेसम्म राज्यलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहेको अवस्था हो । अहिले जनताको इच्छा भनेको स्थिरता हो । त्यसको लागि राज्यलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ । जब पुस ५ गते संसद् विघटन हुनेबित्तिकै यो कदम अलोकतान्त्रि, असंवैधानिक, अराजनीतिक र अधिनायकवादी कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेसले निर्णय ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले पार्टी कार्यालय बैठक राखेर यो निर्णय गरिसकेपछि हामी विरोधका कार्यक्रम लिएर ग्रास रुटमा पुगेका छौैैं । त्यसको लागि ७५३ वटा पालिका, ७७ वटा जिल्ला र ६७४३ वटा वडालगायत क्षेत्रसम्म पुगेर विरोधका कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं । त्यसरी नेपाली कांग्रेस जनताको घरदैलोमा पगिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस रचनात्मक विरोधका कार्यक्रम लिएर अगाडि बढने हो ?
अहिले जे गरिरहेको छ त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ?
कांग्रेस जसरी सशक्त ढंगले अगाडि आउनुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
एकदम सही भन्नुभयो, त्यहीं हो । किनभने संसद् पस्थापना भएपछि हामी आवधिक निर्वाचनमा जान्छौं । एक न एक दिन त निर्वाचनमा जानै छ । यो जनमत जनताले पाँच वर्षको लागि दिएका हुन् । सधैं अस्थिर सरकार भएर नेकपालाई लगभग दुई तिहाई मत जनताले दिएका हुन् । उसलाई जनताको मत नपचेको हो । त्यो जनमतलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीले साढे दुई वर्षमै लत्याउनुभयो । त्यसैले विधिको शासन जोगाउनको लागि एक मात्र उपाय संसद् पुनस्थापना हो । त्यसको सम्वोधन सर्वोच्च अदालतले गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
त्यस्तो भएन भने सकडमै आएर राजनीति गरे भइहाल्यो नि । असंवैधानिक निर्णय भयो भने त राजनीति गरेको भइहाल्छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला दिँदा संविधानबिपरीत दियो भने कालो कोट फुकालेर सकडमा आएर राजनीति गर्दा हुन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक फैसला गरेन भने असंवैधानिक काम उसले पनि गरेको ठहरिन्छ नि केपी ओलीले मात्रै गरेको हुन्छ र । त्यसपछि त केपी ओलीले मात्रै गलत गरे भन्छन र सर्वोच्च अदालतले पनि गलत गरेको ठहरिन्छ नि । जनताले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर भनेका थिए र ?
जनताले राजनीतिक स्थिरताको लागि दिएको जनमत नेकपाले थेग्न नसकेकै हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा ल्याएर मुलुकको राजनीतिलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडा त पार्टी मिलाउनुप-यो नि । त्यो ल्याएर राष्ट्रिय राजनीति नै तहसनहस पार्न पाइँदैन ।
त्यसरी पुलपुलिनै हुँदैन नि । विधिमा हिंड्नुप-यो क्या विधि । पहिला त पार्टी विधानअनुसार चल्नुप¥यो । शासनसत्ता संविधान अनुसार चल्नुप¥यो । विधि र पद्धतिहरु छन् नि । त्यो अनुसार पार्टी र सरकार चल्ने हो भने कसैले प्रश्नै गर्दैनन् नि ।
त्यसैले त हामीले शीर्ष नेतृत्वलाई विधि र विधान अनुसार चल्नुहोस् भनिरहेका छौं । तपाईंले हामीले १६ बुँदे बुझाएको देख्नुभएको छैन ? हामीले पार्टी सभापतिलाई विधि अनुसार चलाउनुहोस् भनेर १६ बुँदे दिइराखेका छौं त । तपाईं विधि र विधान अनुसार चल्नुभएन । त्यसो नगरौं भनेर हाम्रा पार्टी सभापतिलाई भनिराखेका छौं । हाहीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पटक–पटक विधि र विधानका कुरा उठाइराखेका छौं । छलफल र परामर्श गरिराखेका छौं ।
युवा, बुढा, भर्खरका सबैंको पैmसला आगामी १४ औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले दिन्छन् ।
म जिल्लाका कार्यक्रममा पनि पटक–पटक गइराखेको छु । नेपाली कांग्रेसले सत्ताको लागि होइन । हामी विधिको लागि लडेको हो । सत्ताकै लागि मात्रै भए राणा र पञ्चायतसँग लड्नु पर्ने थिएन । त्यसपछि पनि विधिको लागि नगरेको भए सलेन्डर गरेर ‘म त मितीसँगै मिलेँ’ भनेको भए माओवादी द्वन्द्वको बेलामा त्यति धेरै मान्छेले टाउको काटिएर मर्नुपर्ने थिएन । त्यसमा पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेर लडेको न हो । त्यसैले केही दुई/चार जना व्यक्तिहरु आफ्नो स्वार्थको लागेभन्दैमा सिंगो कांग्रेस विधि छोडेर हिड्दैन ।
संसद् पनःस्थापना पनि भएन, चुनाव पनि भएन भने त बाटो खोज्नुप-यो । संविधान जोगाउन आन्दोलन गर्नुप-यो । चार–चारवटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आउन नसकेको संविधान तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा आएको संविधान बँचाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
कसैले कोठामा बसेर निहीत स्वार्थका लागि केही भनेका होलान् । त्यो मलाई थाहा हुँदैन । मलाई थाहा भएको पार्टीले गरेको निर्णय हो । ती कार्यक्रम लिएर म पनि जिल्ला–जिल्लामा गएको छु । ती कार्यक्रममा हामीले पार्टीको आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका छौं । त्यसैलाई मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा भन्ने गरेको छु । जुन निर्णय हामीसहितको केन्द्रीय समिति बसेर गरिएको हो । त्यो भन्दाबाहेक व्यक्तिगत सोच र धारणा होलान् ।
सत्तापक्षसँग भागबन्डामा लागेको । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन लागेको विषयमा चाहीं मैले कुरा गर्न छैन । राष्ट्रपति हुन लागेको भनेर आरोप लगाइएका वरिष्ठ नेतालाई चाहीं मैले सोधेँ । उहाँले राष्टपतिको लागि पहिला डा. रामवरण दयाव हुने बेलामा पनि मलाई गिरिजाबाबुले मलाई सोध्नुभएको थियो । मैले हुन्न भनेको हुँ । त्यसैले अहिले मलाई यो बेकारको आरोप लगाइएको हो । त्यसरी कुरा पनि भएको छैन । म राष्ट्रपति बन्दापनि बन्दिँन भन्नुयभो । तपाईंले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भन्न खोज्नुभएको हो । त्यो कुराको बजार हल्ला हुनेबित्तिकै मैले उहाँलाई सोधेँ । उहाँले होइन भन्नुभयो । अरुका बारेमा कहाँबाट आयो मैले सुनेको छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो आवाज बुलन्द बनाएको छ । बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि ओम्नी, यति, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदलगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा कांग्रेसले खरो विरोध गरेको हो । त्यो जनताहरुमा जगजाहेरै छ । त्यसैले भ्रष्टाचार हुँदा कांग्रेस चुपलागेर बस्यो भन्ने होइन ।